पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि, पेट्रोल प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ नजिक - ramechhapkhabar.com
कृषि र प्रविधि
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि, पेट्रोल प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ नजिक
रामेछाप खबर संवाददाता
६ असार, काठमाडौं ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्यमा एकैपटक २१ रूपैयाँले वृद्धि गरी लिटरको दुई सय बराबर पुर्‍याएको छ। तीन दिनमै पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ७८ बाट एक सय ९९ पुर्‍याइएको हो। २ असारमा प्रतिलिटर ६ रूपैयाँ ५२ रूपैयाँ मूल्यवृद्धि गरिएकोमा आज राती (५ असार) १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी थप २१ रूपैयाँ बढाइएको हो। यसरी हप्ता दिनभित्रै पेट्रोलको मूल्य २८ रूपैयाँले बढेको छ।
त्यस्तै डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २७ रूपैयाँले बढाएर एक सय ९२ रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ। हवाई इन्धनमा आन्तरिक तर्फ १९ रूपैयाँले वृद्धि गरी एक सय ८५ रूपैयाँ प्रतिलिटर र बाह्य तर्फ अमेरिकी डलर एक सयले वृद्धि गरी एक हजार ६ सय ४५ रूपैयाँ पुर्‍याइएको निगमले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।
प्रदेश १ सरकारको बजेट खर्च न्यून : ३४ अर्बको बजेटमध्ये १८ अर्ब मात्र खर्च
प्रदेश १ सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब १३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा जेठ १५ सम्ममा १८ अर्ब ४७ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको ५४ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्र हो । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । जेठ मध्यसम्मको खर्चको तथ्यांक हेर्दा अनुमानित लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको छ ।
प्रदेश १ को कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत अशोक काफ्लेका अनुसार सो अवधिमा पूँजीगततर्फ ९ अर्ब २४ करोड ४९ लाख र चालूतर्फ ९ अर्ब २२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले यस वर्ष पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ७ लाख र चालूतर्फ १६ अर्ब ५४ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
प्राप्त तथ्यांक अनुसार प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सबैभन्दा कम २० दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ अर्ब २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ७ करोड २६ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको थियो ।
प्रदेश सरकारका १३ मन्त्रालयमध्ये तीन मन्त्रालयको बजेट खर्च ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने अन्य मन्त्रालयको ३५ प्रतिशतभन्दा कम छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५५ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको ५३ दशमलव ४१ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको ४९ दशमलव ८३ प्रतिशत र अन्य मन्त्रालयको बजेट खर्च ३५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ ।
सामाजिक रूपान्तरणदेखि विकास निर्माणसम्ममा बजेट विनियोजन गरे पनि लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न प्रदेश १ सरकार असफल देखिएको हो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि चालू आर्थिक वर्षको आठौं महीनामा बजेट पुनरवलोकन गर्ने बताए पनि त्यो हुन सकेन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० का लागि समेत बजेट ल्याइसकेको छ ।
“यहाँ त को पैसा वाला छ भन्ने कुरा मात्र हेरिने रहेछ ” : श्रीजना आचार्य
११ वैशाख, काठमाडौं । राजनितिक भनेको यहाँ पैसा वाला र ठाउँमा आफ्ना मान्छे भएकालाई...
म्यानपावरले भन्यो विदेश गएपछि काम सिकिन्छ, म भन्छु : ‘सीप नसिकी गए आकाशका तारा देखिन्छ’
काठमाडौं, २९ कात्तिक । कतार जाने बेलामा मेरो भिसा ट्याक्सी ड्राइभरको थियो । ट्याक्सी...
निशुल्क इन्डक्सन चुलो पाइने, कसले दिन पाउँछन् आवेदन ?
२५ जेठ, काठमाडौं । वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले निशुल्क विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन)वितरणको लागि अनलाइन...
‘मलेसियामा श्रमिककाे तलब बढ्याे भनेर खुसी हुनुपर्ने केही छैन, महँगी उस्तै छ !’
२० असार, काठमाडौं । छत्र लकाई खड्का / मोरङ्ग, हाल मलेसिया । मलेसिया सरकारले...
साउदीमा नेपालीले नेपाली नै ठग्ने क्रम बढेको भन्दै दुतावासले जारी गर्यो यस्तो सुचना !
साउदी अरेबियामा अड्कियो एक नेपालीको शव, मेनपावरबाट आलटाल भएको परिवारको गुनासो
मलेसियामा गएको २४ घन्टामा पाँचको मृत्यु, संक्रमित संख्या कति ?
साउदीमा कस्तो अवस्थामा लाग्छ एक्जिट भिसा ?
बंगलादेशमा निरन्तर वर्षा र बाढी, १०० भन्दा बढीको मृत्यु
२० असार, काठमाडौं । बंगलादेशमा केही दिनदेखिको निरन्तर वर्षाका कारण बाढी आएको छ ।...
श्रीलंकामा इन्धन संकटः सबै सरकारी तथा निजी विद्यालय बन्द !
१८५ यात्रु सवार स्पाइसजेटको विमानमा आगलागी
बिहेमा भिनाजुले सालीको हात समातेर ‘डान्स’ गरेपछि….
अनौठो घटना : मम: खाँदा एक ५० वर्षीय व्यक्तिको मृत्यु
कविता / जोक्स
हो म बेश्या हु
हो म बेश्या हु।। आउ न मलाइ मूल्य तोका, आउ न मलाइ एक रात...
कविता – ऎनाको जिन्दगी ।
पथ्थरको शहर बोकेर आएको छ एकाबिहानै एउटा सुदुर जिन्दगी भोकहरुको आँखामा इन्द्रेणी सपना सजाएर...
Copyright © 2016 ramechhapkhabar.com सम्पर्क/हाम्रो बारे